Waa maxay Feliway maxaase loo adeegsadaa? | Bisadaha Noti
Waa maxay Feliway maxaase loogu adeegsadaa?
Monica Sanchez | | Tricks
Bisadu ma walwalsan tahay? Xaqiiqdii ma ku raaxeysataa markaad ku dhex jirtid side? Hadday sidaas tahay, waxaa jira wax soo saar kaa caawin doona inaad degganaato: the Feliway, loo iibiyay sidii mashiinka wax lagu faafiyo ama lagu buufiyo. Waxay kuxirantahay midka aad iibsaneysid, runtu waxay tahay in lagugula talin doono xaalado gaar ah, inkasta oo ay isku shey tahay.
Laakiin dhab ahaantii maxay tahay Feliway? Maxaa laga sameeyaa? Iyo tan ugu muhiimsan, Maxaa loogu isticmaalay si sax ah?
1 Waa maxay Feliway?
2 Maxaa loogu talagalay
Waa maxay Feliway?
FELIWAY Classic -...
Tani waa shey in waa nuqul dabiici ah oo ka kooban wajiga pheromones ee bisadaha. Hadaad sifiican u fiirsato, asxaabteena badiyaa waa noo yimaadaan, oo wejiyada ayeey nagaga cadayaan, sidaasna waxay nooga tagayaan borotoomadooda Waa dariiq, marka hore, in la ogeysiiyo in aan ka mid nahay qoyskiisa, iyo sidoo kale si aan si uun, aan ula socodsiino isaga ama iyadu in isaga ama iyadu ay dareemi karaan badbaado iyo badbaado inala joogo.
Sababahan awgood, waxaa aad loogu talinayaa xaaladaha walaaca leh in la isticmaalo sheygan, sida waxay kaa caawineysaa inaad isdejiso badan.
Maxaa loogu talagalay
Marka lagu daro xaaladaha walaaca, runta ayaa ah in sidoo kale lagula taliyo kiisas kale oo badan. Laakiin sidaan horay u sheegnay, faafiyaha iyo buufinta marwalba looma isticmaalo isla xaaladaha:
Xaaladaha uu jiro isbeddelka guriga, ama isbeddelka guriga (imaanshaha xubin cusub oo qoyska ah, tusaale ahaan, qof ama xayawaan), marka ay soo booqdaan, ama haddii aad dareento raaxo -darro aad ee qurxinta aad u badan.
Badeecaddan ayaa loo adeegsadaa safarada, si loo aado dhakhtarka xoolaha, si loo dejiyo hoyga digaagga intaan maqan nahay, si loo joojiyo calaamadaynta kaadida ama xoqidda alaabta guriga.
Qalabkan fursadaha uu saaxiibkaa ku dareemi doono farxad sida kan sawirradu aad u sarreeyaan 😉.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Tricks » Waa maxay Feliway maxaase loogu adeegsadaa?
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad madow oo qurux badan oo aan siineynay kalgacal badan tan iyo markii ay guriga timid, yaraanteedii waxay aheyd mid jecel kalgacal, waxaan haystaa laba eeyo yaryar oo yaryar ah oo si aad ah ula socda, gaar ahaan labka, xaqiiqda ayaa ah in hadda iyadu mar hore ayay haysataa hal sano, oo laga soo bilaabo da'da 6 ama ka badan ama ka yar dabeecaddiisu waxay bilawday inay bedesho rabshad marka uu doonayo oo uu aad u madaxbannaanaado, uma sii qubo sidii uu ahaan jiray oo eeyga ayaa garaaca, ma doonayo inuu ciyaaro , sidoo kale iyo haddii dadku guriga yimaadaan Xitaa iyadu way ku cuntaa iyaga, ma fahmin sababta ay sidaas u tahay haddana hadda maaddaama oo aan leeyahay baranda oo ay tahay xagaa ayaan albaabbada furaa oo ay ka tagtaa habeenkii saqafka iyada oo aan dhag jalaq u siin , sedex jeer ayaan ku qasbanaanay inaan ka saarno barxada deriska maxaa yeelay iyadu ma taqaano sida looga baxo hal mar gudaha, waa dhif iyo naadir ma ogi, waad salaaxeysaa waxayna kaa tagaysaa mar kaliya marka xigta wuu ku xoqaa, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aan sameyn karo iyo sababta ay sidaas u tahay hadda markaan ku korinay kalgacal.
Ku jawaab magnolia
Waa salaaman tahay Magnolia.
Haddiiba ay dhacdo, waxa ugu horreeya ee aan kugula talin lahaa waa iyada oo loo kaxeeyo dhakhtarka xoolaha imtixaan buuxa. Waxay u muuqan kartaa wax lala yaabo, laakiin mararka qaarkood isbeddellada lama filaanka ah ee dabeecadda waxaa u sabab ah xayawaanka oo dareema xanuun ama nooc ka mid ah raaxo-darrada.
Haddii ay dhacdo in wax walba ay hagaagsan yihiin, waxaa muhiim ah in la ogaado haddii bisaddu wax khibrad xun ah ay ku soo aragtay guriga, sida in eey ama qof uu ka cabsaday ama ku dhibay beryahan dambe. Hadday saas tahay, bisaddu waa inay dib ula dhaqanto eyga ama qofka, iyadoo la isku dayayo inay labadaba baashaalaan iyagoo is ixtiraamaya booska midba midka kale (qofku waa inuu siiyaa bisadda si ay iyadu u aaminto; dhinaca kale , haddii aysan jeclayn mid ka mid ah eeyaha, waa inaad siisaa labada abaalmarin mar kasta oo ay wada joogaan).
Waxay sidoo kale noqon kartaa inay u dhaqanto sidan oo kale haddii ay dareento culeys ama culeys. Xaaladahaas oo kale, alaabooyinka xasilinta sida Feliway ayaa kaa caawin kara, ama Ubaxyada Bach (gaar ahaan, Samatabbixinta Samatabbixinta: qaado 4 dhibcood oo ah quudinta qoyan).
Haddii midkoodna uusan shaqeynin, markaa waa in loo yeeraa dhakhtarka cilmiga xoolaha.
Waxaan ku akhriyay tilmaamaha Feliway ee loo adeegsado inay tilmaamayso in la dhigo faafiyaha "qolka guriga ee bisadu doorbido." Muhiimadu waxay tahay qolkey bisadu jeceshahay waa qolkeyga oo kaliya. Waxaan weydiinayaa, miyaan hormoonnadaas si uun wax u saameyn dadka? dhib malahan aniga?
Waxaan cadeeyay inaan jeclaan lahaa inaan rakibo qalab fidiyaha maxaa yeelay bisadeyda ayaa si xad dhaaf ah u leefleefa iyada oo aan lahayn wax dhibaato caafimaad oo muuqata. Ma aysan keenin dhibco bidaar aad u weyn oo caloosha ah mana doonayo in tani ay horumar gaarto.
Waxay ahayd bisad xishood badan, oo aan aad isugu xirnayn laakiin aad u deggan oo ciyaar badan, waxay xitaa si tartiib ah u nadiifisay si joogto ah. Muhiimadu waxay tahay in labo sano ka hor aan qaadanay bisad (laga badbaadiyay xadgudub, sheeko dheer) waligeedna waxay noqotay mid aan muuqan, fogeyn, cunaysa wax aad u yar, jidhkeeda oo dhan si qasab ah u leefaysa, dhawr jeer maalintii oo maalintii oo dhan sariirtayda jiifta. Isagu isma fahmaan bisadda, wuxuu rabaa inuu ciyaaro oo iyadu way weeraraysaa. Marka la soo koobo, waxaan tixgelinayaa Feliway.
Ku jawaab Mirta
Maya, wax saameyn ah oo waxyeello ah kuma lahan dadka. Ha ka welwelin.
hello Waxaan hayaa bisad xoqeysa alaabteyda cusub, xoqitaanku dhag jalaq uma siinayo ... maxaan ku siiyaa wadada fiiqan xoqida si ay u qaadato kalgacal ama alaabta guriga si aysan ugu soo dhowaan iyaga?
Ku jawaab sandra
Si aad u barato sida loo isticmaalo xoqista, waxaan kugula talinayaa inaad akhriso maqaalkan.
Marka laga hadlayo dariiqa, kiiskaaga gaarka ah waa inaad ku dhejiso alaabta guriga.
Sidee looga farxiyaa bisaddaada
Maxay bisaduhu ugu seexdaan dusha mulkiilayaashooda
Qiimo -dhimis ku samaysa cuntada bisadaha iyo agabka